Nelson Chamisa News - The latest news from TRT World
Showing 16 results related to "Nelson Chamisa".
Emmerson Mnangagwa, who was sworn in as president of Zimbabwe on Sunday, faces the challenges of a worsening economy and a divided nation after a disputed vote.
Tendai Biti, a former finance minister and newly elected member of parliament for the opposition Movement for Democratic Change, is wanted in Zimbabwe for allegedly inciting violence after urging opposition supporters to defend their votes.
Nelson Chamisa, who lost to ruling ZANU PF's Emmerson Mnangagwa by a narrow margin, vows to challenge what he says is a "fraudulent" and "illegitimate" election.
Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa said he seeks to "peacefully" end election crisis while his government vowed to enforce a security crackdown to prevent further unrest in Harare.